शुरुआतीहरूको लागि क्यामेरा कच्चा शुरुआतकर्ताहरूको लागि क्यामेरा कच्चा क्रिएटिव अनलाइन
शुरुआतीहरूको लागि क्यामेरा कच्चा
सबैलाई नमस्कार! यस पोष्टमा म सरल र छिटो तरीकाले के कामहरू गर्दछ भनेर वर्णन गर्न आएको हुँ क्यामेरा कच्चा, एक विकास विकल्प जुन फोटोशपमा छ र जुन धेरै शक्तिशाली छ यदि हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्यौं भने। यस तरिकाले, पहिलो चरण हाम्रो उपकरणमा Adobe Photoshop स्थापना भएको हुनुपर्दछ।
रमा सम्पादन गर्न सक्षम हुन, हामीले भनिएको क्यामेराको साथ चित्रहरू शूट गर्नुपर्नेछ ढाँचा, अर्थात् रॉ। यो गर्नका लागि, हामी शूटिंग ढाँचाको लागि हाम्रो क्यामेराको विकल्पहरू हेर्नेछौं र हामी यसलाई परिवर्तन गर्नेछौं।
यदि तपाईंको क्यामेरा अधिक आधारभूत छ र कच्चा ढाँचा छैन भने, तर तपाईं अझै पनि क्यामेरा रॉको साथ खेल्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँ छन् अनलाइन कन्भर्टरहरू यसले तपाईंलाई फोटोको ढाँचा कच्चामा पार गर्न मद्दत गर्दछ वा फोटोशपमा नै। कच्चा बाहेक अरू ढाँचामा सम्पादन गर्ने सम्भावना पनि छ, एक पटक भित्र भित्रबाट फोटोशप हामी कच्चा क्यामेरा फिल्टर विकल्प खोल्न सक्छौं, तर यो सिफारिश गरिएको छ कि अधिकतम क्षमताको रूपमा यसलाई प्रकट गर्न सक्षम हुन स्वरूपको लागि टिप्पणी गरिएको हुन।
एकचोटि हामीसँग हाम्रो तस्बिरहरू इच्छित ढाँचामा छ, हामी तिनीहरूलाई कम्प्युटरमा हस्तान्तरण गर्नेछौं र हामी विकास गर्न चाहने छनौट गर्दछौं। हामी तिनीहरूलाई फोटोशप प्रतिमामा तान्दछौं। क्यामेरा रॉ स्वत: खुल्नेछ, र तपाइँका छविहरू एक स्ट्रिपको रूपमा इन्टरफेसको देब्रेपट्टि राखिनेछ।
आधारभूत चरणहरू सुरू गर्न अनुसरण गर्न:
दायाँ तस्विर विन्डो मुनि, हामीले छनौट गर्नै पर्दछ रंग ठाउँ जुन हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं, जसको लागि म सिफारिस गर्दछु एडोब आरजीबी सबैभन्दा शक्तिशाली हुनु को लागी।
काट्नुहोस् : हामी संग शीर्ष मेनू जुन हामी पनि फेला पार्नेछौं क्लिपिंग उपकरण। यदि तपाईंले एक सेकेन्ड भन्दा बढि यो प्रेस गर्नुभयो भने, विकल्पहरूको साथ मिनी मेनू खुल्नेछ। पहिलो कदम चाल्नुयदि आवश्यक छ भने, काँटछाँटमा काँटछाँट गर्ने मतलब छैन।
उपकरण परिवर्तन गर्नुहोस्छवि आवश्यक भएमा सच्याउनको लागि aberration वा समान, जबकि फोटोशप पनि प्रयोग गर्न सक्दछ।
स्तर : यो उपकरण प्रयोग गरीन्छ ताकि प्रोग्राम को क्षितिज स्तर स्वचालित रूपमा, उपकरणमा क्लिक गरेर र यसलाई हाम्रो तस्विर समावेश भएको एक सीधा रेखा तान्दै।
लेन्स सुधार: प्रोफाइल ट्याब भित्र, हामी प्रोफाइल छनौट स्वचालित रूपमा एक छनौट गर्नेछौं लेनको विकृति सच्याउनुहोस्चिया मा समान ट्याब भित्र रंग विकल्प, हामी स्वचालित पनि चयन गर्नेछौं। क्यामेरा वा वातावरणले उत्पादन गरेको हुनसक्ने कुनै पनि र mis बेमेललाई रोक्नको लागि। अन्तमा, म्यानुअल ट्याब भित्र, हामी विकृतिहरूलाई हामीले सुधार गरेको जस्तै सुधार गर्न सक्छौं।
सेतो सन्तुलन: यो उपकरणले हामीलाई अनुमति दिनेछ रंग क्यास्ट हटाउनुहोस् हाम्रो फोटोग्राफी को र यसलाई तटस्थ। यो उपकरण वास्तवमै उपयोगी छ र सुपर सजीलो प्रयोग गर्न को लागी, साथ साथै छिटो। हामी केहि खैरो वा सेतोमा क्लिक गर्दछौं यसमा हाम्रो फोटो वा स्ट्रिपको अर्को छ, छविलाई तटस्थ गर्न, र यसरी हामी ग्रे फोटो सहित प्रबन्ध गर्न सक्छौं पेशेवरहरूले तपाईंको फोटोहरू बेअसर गर्न। तपाइँले थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ परिणामहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाइँको फोटोमा थियो, उदाहरणका लागि, गुलाबी कास्ट र तत्काल गायब हुन्छ।
El आधारभूत विकास मुख्य प्यानल छ: रंग तापमान। एक्सपोजर, छाया, हाइलाइटहरू, गोरा, कालो, स्पष्टता, कन्ट्रास्ट, तीव्रता, र संतृप्ति। यी स्तर सम्पादन योग्य छ तपाईको कर्सरको साथ, ताकि तपाई आफ्नो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो तस्वीर कसरी हेर्न चाहानुहुन्छ। जहाँसम्म, यी प्रभावहरूको साथ overboard जानबाट बच्न एक सानो चाल हो वैकल्पिक कर्सर सार्दा Alt थिच्नुहोस्, उदाहरण को लागी, प्रदर्शनी। यसले तपाइँलाई थाहा दिन्छ यदि तपाइँको तस्बिर अधिक मात्रामा भइरहेको छ, वा यसको विपरित, यदि यसको उज्यालो छैन भने।
भित्र भित्र HSL प्यानल, एक मेनू को विकल्प संग देखा पर्छ ह्यू, संतृप्ति र luminance। तिनीहरू कर्सरको साथ आधारभूत विकास प्यानलको रूपमा काम गर्दछन्। को लागी धेरै उपयोगी छवि रंगहरू परिवर्तन गर्नुहोस् सिधा फोटोशप प्रयोग नगरी।
समायोजन ब्रश : यो ब्रश मैले जहाँ पनि रंगेको एक मास्क सिर्जना गर्नुहोस्हाम्रो फोटो मा छ। एक पटक भने मुकुट, हामीसँग पहिले नै टिप्पणी गरेका मानहरू परिवर्तन गर्ने विकल्प छ, जस्तै जोखिम, कन्ट्रास्ट, आदि यो महान् छ किनकि यो केवल त्यस ठाउँमा लागू हुन्छ जुन तपाईंले भनिएको ब्रशको साथ चित्रित गर्नुभयो, र यसले फोटोशपमा छनौटबाट धेरै समय बचत गर्दछ।
प्यानल प्रभावहरू, जसमा विकल्प समावेश गर्दछ मेटाउनुहोस् धुंध, भिग्नेट्स, वा मार्बलिंगको साथ आवाज / अन्न अनुकरण गर्नुहोस्।
फिल्टरहरू: स्नातक र रेडियल। तिनीहरू टिप्पणी समायोजन ब्रश जस्तै काम गर्दछ तर एक ढाँचा सेट। यो एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो।
उपकरणका लागि स्पट मसी हटाउन। जस्तो कि यसको नामले स sugges्केत गर्दछ, यो उपकरण हराएको छ। जे होस्, यसको प्रयोग यो कार्यक्रमको लागि सिफारिस गरिदैन, परिणाम धेरै राम्रो छैन.
क्यामेरा क्यालिब्रेसन: यस प्यानलको साथ हामी छनौट गर्न सक्छौं एक क्यामेरा प्रोफाइल र एक प्रकारको विकास प्रक्रिया। मेरो सल्लाह यी प्रोफाइलहरू छुनु र कार्यक्रमको हालको डिफल्ट सेटिंग्स राख्नु होईन।
विस्तार प्यानल: यहाँ हामी थप्न सक्छौं फोटोग्राफीमा फोकस गर्नुहोस्, तर यो दुरुपयोग वा त्रिज्या भन्दा अधिक गर्न उचित छैन, त्यस पछि अन्न देखा पर्छ र फोटो बिग्रेको छ। यो प्यानल भित्र हामीसँग पनि छ आवाज घटाउने विकल्प, जुन धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ, तर हामीले भनेका छौं कि हामी यो अधिक गर्न सक्दैनौं किनकि यो याद गर्न सकिन्छ र फोटो बिग्रन्छ।
म आशा गर्छु कि पोष्ट ती व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी छ जसले क्यामेरा र नजान्दैनन् र प्रत्येक उपकरणको लागि के बारे शंका छ! यो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ र परिणामहरू धेरै राम्रो हुन सक्छन्, त्यसैले म तपाईंलाई यससँग खेल्न प्रोत्साहित गर्दछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » शुरुआतीहरूको लागि क्यामेरा कच्चा
स्क्रिनजी भनिने यस नि: शुल्क अनलाइन सम्पादकको साथ स्क्रीनशटहरू सुधार गर्नुहोस्